Ndira wekuzvarwa dombo - garnet - mutsvuku - Nyowani yekuvandudza 2021
Garnet ndiro dombo rekuzvarwa raNdira maererano nezvose zvekare uye zvazvino zvinyorwa zvejan birthstone color.
Zvinorevei kuti Ndira yekuzvarwa inorevei?
Dombo rekuzvarwa idombo rinosanganiswa nemwedzi wekuzvarwa waNdira. Garnet. Icho chiratidzo chekudzivirira. Inogona kuchengetedza iye akapfeka akachengeteka panguva yekufamba semuenzaniso.
Garnet, dombo rekuzvarwa raJan, rinocherwa mune muraraungu wese wemavara. Iyo Garnet mhuri ndeimwe yeakanyanya kuomarara mugem renyika. Haisi yemhando imwe chete asi kuti inoumbwa nemhando dzakasiyana siyana. Tsvuku chete pyrope garnet inoonekwa sedombo rekuzvarwa raNdira.
Chii chaJanuary dombo rekuzvarwa?
Ndepapi panowanikwa dombo rekuzvarwa raNdira?
Chii chinonzi Ndira yekuzvarwa mabwe?
Ndekupi kwekuwana kwaJanuary dombo rekuzvarwa?
Ndezvipi zviratidzo zvezodhiac zveJanuary matombo ekuberekwa?
Garnet inowanzobatanidzwa nemuvara tsvuku, aya mabwe anokosha anogona kuwanikwa mune chero ruvara uye isarudzo dzakakurumbira dzezvishongo zvemarudzi ese.
Icho chakadzika, chakasviba, chakafuma chakatsvuka kuti piriviri zvishoma tsvuku.
Tsvuku iwo ruvara pakupera kwechiitiko chinoonekwa chechiedza, padhuze neorenji uye pakatarisana ne violet.
Iyo yekutanga deposits yepiropu Garnet dzaive muBohemia, muCzech Republic. Aya masosi akawedzera nhoroondo zvino anoshanda, uye zvishoma zvinyorwa zvinobva ipapo nhasi. Iyo huru Pyrope deposits iri muMozambique, Tanzania, Kenya, South Africa, India, Sri Lanka, China, uye iyo US (Arizona neNorth Carolina).
Isu tinotengesa garnet mhete, zvishongo, mhete, mitsipa nezvimwe.
Garnet zvishongo zvematombo zvinopenya zvakadzama & zvinodakadza tsvuku hue. Ndira Garnet chiratidzo chekuda, rombo rakanaka & kukurudzira.
Pane zvakanaka matsvuku magarnet ari kutengeswa muchitoro chedu
Pyrope Garnet pamweya zvinoderedza kunetseka, uye zvinokurudzira kudzikama, ushingi uye kutsungirira. Inovhenekera mamiriro ese. Inodzivirira hwaro uye korona chakras, uye inogona kuenzanisa moyo uye brow chakras futi. Pyrope garnet inomutsa kudziya uye unyoro, ichibatanidza masimba ekugadzira eayo ega.
Capricorn neAquarius matombo ese aJan dombo rekuzvarwa
Chero iwe uri Capricorn kana Aquarius. Garnet ndiro dombo kubva muna Ndira 1 kusvika 31.
Natural raJanuary dombo rekuzvarwa riri kutengeswa mune yedu dombo shopu
Tinoita tsika yakagadzirwa munaNdira mabwe ekuberekwa semhete, maringi, mhete, zvishongo, zvishongo… ndapota taura nesu for quote.
Pyrope garnet vaviri 6.23 ct
Kudzvanya garnet 0.49 ct